DAAWO: Madaxweyne Farmaajo oo markale ka hadlay Corone-Virus, Digniin-na u diray Shacabka Soomaaliyeed.
March 27, 2020 NEWS 1
MUQDISHO(P-TIMES) – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay mideeyaan cududdooda iyo awooddooda, una istaagaan sidii ay dalkooda uga samata-bixin lahaayeen duruufaha caafimaad ee caabuqa Coronavirus uu dhaxal siiyey dalal badan oo caalamka ah.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in dalal badan oo aduunka ah uu dhibaato ba’an u geystay xanuunkan, isagoo sheegay in ay dadka Soomaaliyeed looga baahan yahay taxadar dheeraad ah in ay yeeshaan.
Madaxweynuhu wuxuu ku baaqay in la joojiyo dhammaan isku imitaanka laga maarmi karro, isagoo sheegay in looga baahan yahay shacabku haddii aan wax qasab ah jirin in lagu negaado guryaha oo la joogo, maadaama halista xanuunkan ay badan tahay.
Madaxweyne Farmaajo ayaa xasuusiyey shacabka in dalka laga helay sadex kiis oo cusub, wuxuuna sheegay in ay Xukuumadda Soomaaliya la dagaalamayso sidii uusan u fidin laheyn, isagoo sheegay in uu si’i aan caadi aheyn u fidiayo xanuunka oo ay tahay in laga hortago.
Farmaajoow hoggaanka hayinka ahi waxaa lagu asteeyay hadal yar iyo hawl badan. Marka uu waddan ay masiibo qaran soo waajahdo dowlad wanaagga waxaa lagu gartaa in la dardar galiyo qorshooyin shacabka ama ka gaashamaya mise ka takhfiifinaya aafada ay dareemi doonaan. Dar baa dowladda federaalka iyo maamullada ay ka kooban tahay ugu garaabi doona Soomaaliya waa dal “sabool ah” ee aanay gacanta uugu jirin imkaaniyaadkii ay wax iskaga caabbin lahayd, laakiin qiilkaas ayaa ba fadeexadda ugu weyn ku ah kuwa hoggaanka isku sheegaya. Sabab?
Casrigan aynu ku sugannahay aafaad badan oo badankoodu ay diintu inooga sii digtay oo cilmi saynisku na uu haatan saadaalintooda inoo fududeeyay ayaa jira, sida duufaanaha mar ba ina saameeya, abaaraha daba dheeraaday iyo robabka qeyral caadiga ah. Inta balaayiin doollar ee dalkan lagu deeqo iyo dakhliga gudahiisa ka soo xerooda isku dara ee waa maxay tallaabooyinka la taaban karo ee ay madaxdeenu uga tabaabusheysteen in saameynta aafaadkaas looga hor tago ama se lagu dhimmo? Macluumaadkan uu Farmaajo shacabkeena ku akhriyayo waxaa loo qorsheeyay shacab ay dowladahoodu jaa ka haqabtireen baahiyaha daruuriga ah sida biyaha saafiga ah, daryeelka caafimaadka iyo tamarta.
Soomaaliya inta ba way iska kaafin kartaa oo kharasha badanina kuma kaceen. Ilaha biyood dalku qani ayuu ku yahay. Ilayska na qani ayuu ku yahay. Dhismaha isbitaalladu qaali ma aha. Dakhaatiir iyo shaqaale caafimaad qani ayaynu ku nahay. Qiilkee ayaa haddaba loogu garaabi karaa madaxdan dalka iyo dadka sidan u dayacay? Suudh la isku soo juffay iyo hadal kaamerad horteeda lagu hadaaqay waxba tari maayaan ee gees inoo dhaafa.